सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको हुने के हो ? यी युवतीहरुको यस्तो जवाफ (हेर्नुहोस भिडियो) – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ समय: ३:१९:०२
Posted on December 30, 2020 Authorelekalikhabar Comment(0)
सुरुमा दरो त्यसपछी नरम भिजेको हुने के हो ? यी युवतीहरुको यस्तो जवाफ आज भोलीको प्रबिधिको बिकास सँगै मान्छेहरु आफुले आर्थिक जोहो गर्नको लागि त्यसै गरी आफ्नो परिचय बनाउनको लागि साथै दर्शकहरुको मनोरञ्जनको लागि बिभिन्न काम कार्यहरु गरिरहेकै ह्न्छ । पछिल्लो समयमा आफुलाई सजिलो अनि मन पर्ने एउटा पेशा जुन यु ट्युव बनिरहेको छ । सामाजिक कार्यहरु पनि गर्दे आईरहेका छन ।
नि शुल्क रुपमा बन्ने यु ट्युव एकाउन एउटा जिमेल आई डीवाट बन्दछ । पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल मध्ये यु ट्युव पनि आम मानिसहरुको उपयोगको लागि निकै राम्रो सुबिधा बनेको छ । हरेका दिन यु ट्युवमा सयौ भिडियोहरु अपलोड भएका हुन्छन भने लाखौं करोडौ दर्शकहरुले हेरिरहेका हुन्छन ।
आज भोलि का युवक युवतीहरु प्राय सबैजसोले फेसबुक यु ट्युव इन्स्टागा्रम इमो म्यासेन्जर लगायतको धेरै सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहन्छन । हेरौं भिडियो कृपया यो भिडियो केवल रमाईलो को लागि र मानिसहरुको प्रतिकृया बुझ्नको लागि मात्र हो यसलाई केबल सामान्य रुपमा लिएरै हेर्नुहोला ।
Last Updated on: June 5th, 2021 at 3:19 am